Midowga Yurub wuxuu falanqeynayaa baahida loo qabo in la yareeyo qiiqa ka hor imanaya isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Qiiqa gaaska lagu sii daayo ee keenaya kuleylka adduunka waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo yareeyaa. Ujeeddooyinka Heshiiska Paris waa in la fuliyaa haddii aynaan rabin in heer kulka uu sii kordho.
Marka loo eego falanqaynta cusub ee panoramic ee ku saabsan tallaabada EU ee ku saabsan tamarta iyo isbeddelka cimilada oo ay daabacday Maxkamadda Hantidhawrka Yurub, ficil wax ku ool ah oo dhinaca tamarta ah ayaa lagama maarmaan u ah la dagaallanka isbeddelka cimilada. Tallaabooyinkee ayey tahay in Midowga Yurub uu qaado si uu ula qabsado isbeddelka cimilada?
1 Falanqaynta dusha sare
2 Tamarta iyo isbedelka cimilada
3 Isbedelada qaabka tamarta
Falanqaynta dusha sare
Isticmaalka awoodda ayaa u dhigma 79% qiiqa gaaska lagu sii daayo ee Midowga Yurub. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in diiradda la saaro yareynta qiiqa iyadoo la beddelayo isticmaalka tamarta iyo ilaha.
Sida laga soo xigtay hanti-dhowrka falanqeyntan, qiiqa gaaska lagu sii daayo waa in sida ugu dhakhsaha badan loo yareeyaa si loola qabsado isla markaana loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada, iyadoo la yareynayo saameynta dadka reer Yurub sida ugu macquulsan.
Cimilada Yurub aad ayey uga duwanaan doontaa maanta ilaa dhammaadka qarniga, xitaa haddii loo maleeyo in celceliska heerkulka sare uusan gaarin ka sarreeyaa 2 ° C sida laga soo xigtay qodobada heshiiskii Paris.
Tamarta iyo isbedelka cimilada
Hantidhawrayaasha falanqaynta waxay xaqiijinayaan in isticmaalka iyo soo-saarka tamarta ay xiriir dhow la leedahay isbedelka cimilada, tan iyo jiilka tamarta ee aan ka imaanayn ilaha la cusboonaysiin karo sida qorraxda, dabaysha, iwm. Waxay soo daayaan gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ka qayb qaata kuleylka adduunka.
Wax soo saarka tamarta ee laga helo shidaalka shidaalka laga helo shidaalka iyo isticmaalka tamarta ee gaadiidka, warshadaha, qoysaska iyo beeraha oo wada jira 79% qiiqa gaaska lagu sii daayo ee EU.
Maadaama qiiqa gaaska ay dhibaato weyn ku yihiin cimilada meeraha, waxaa lagama maarmaan u ah Midowga Yurub inay yareeyaan. Saadaasha hadda socota waxay muujineysaa in baahi badan loo qabo in la qabto si loo gaaro bartilmaameedka 2030 iyo bartilmaameedka 2050 ee yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo.
Waxaas oo dhami waxay caqabad ku noqon doonaan dalalka xubnaha ka ah, maaddaama oo keliya aysan u baahnayn inay la qabsadaan isbeddelka cimilada, laakiin sidoo kale waxay isku dayi doonaan inay yareeyaan oo ay beddelaan qaabka tamarta hadda jirta. Beddelida habka loo soo saaro tamarta waddanku ma sahlana. Sidaa darteed, waxay caqabad ku noqon doontaa in wax laga beddelo qaababka wax soo saarka oo lagu hoggaamiyo u wareejinta tamarta halkaasoo tamarta la cusboonaysiin karo iyo waxtarka tamarta ay ku adkaato.
Isbedelada qaabka tamarta
Qaabka ugu dhakhsaha badan ee la qabsiga isbeddelka cimilada ayaa ah isbeddelka qaabka tamarta ee EU.
Hantidhawryadu waxay tixgelinayaan in, dhinaca tamarta, arrin muhiim ah oo ka mid ah tallaabada Midowga Yurub ay tahay aasaasidda suuq tamarta gudaha ah oo u oggolaanaya wareegga bilaashka ah ee gaaska iyo korontada iyo ganacsigooda oo aan lahayn xuduudda dhulka oo dhan. ee EU. Ujeedada suuqa tamarta gudaha waa lagu gaaro ujeeddooyinka siyaasadeed ee midowga yurub ee bixinta tamar jaban, oo leh qiimayaal tartan ah, deegaan ahaan waaraya oo aamin ah, hab faa'iido leh.
Ujeeddooyinka iyo ujeeddooyinka la soo rogay sannadaha 2030 iyo 2050 waa kuwo aad u adag in la gaaro waxayna u baahan doonaan dadaal ballaaran oo ka imanaya dhammaan Dowladaha Xubnaha ka ah. Si kastaba ha noqotee, waa ballanqaad ay tahay in lagu dhex milmo, maaddaama dadaal dheeri ah loo baahan yahay in la sameeyo si loo caddeeyo siyaasadaha waxqabadka iyo yareynta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Inta udhaxeysa 2071 iyo 2100, cimilada Yurub aad bey uga duwanaan doontaa tii 1961-1990 iyadoo kororka 2 ° C laga soo bilaabo heerarkii warshadaha kahor. Qiyaasta kor u kaca 2 ° C waa celcelis adduunka ah: Xitaa haddii la gaaro, heerkulku wuxuu aad uga badnaan doonaa heerkan gobollada qaarkood.
Waa inaan yareynnaa qiiqa gaaska lagu sii daayo qiima kasta ha ahaadee si looga hortago dhacdooyinka cimilada ee noocan oo kale ah ee aan jirin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Midowga Yurub wuxuu falanqeynayaa baahida loo qabo in la yareeyo qiiqa qiiqa ee wajahaya isbedelka cimilada